InfoJobs na-emezigharị ngwa ya site na imeziwanye ọrụ ya na ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ | Esi m mac
InfoJobs na-eme ka ngwa ya dị ọhụrụ site na imeziwanye ọrụ ya na ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ
Ọtụtụ ihe emeela kemgbe nsogbu ahụ malitere na Spain, nsogbu nke were ọtụtụ nde ọrụ n'ihu. Ọtụtụ abụrụla ndị a manyere ịmalite ọrụ nke ha iji gbalịa ịpụ na enweghị ọrụ, mana ole na ole enweela ihe ịga nke ọma. Echere m na n'oge a Agaghị m agwa onye ọ bụla na InfoJobs Ọ bụ otu n'ime nyiwe kachasị mma maka ndị na-achọ ọrụ ma ọ bụ ndị chọrọ ịgbanwe ọnọdụ. Na mgbakwunye, ekele maka itinye ya n'ọrụ, ọ dịghị mkpa ka anyị nọrọ n’ihu kọmpụta ka enwere ike ịgwa gị oge niile maka ọrụ ọrụ ọhụụ ma ọ bụ ọkwa anyị na-enweta.
Oge ọ bụla ụlọ ọrụ malitere ngwa na ahịa, ọ na-eme ya dabere na njirisi nke ha mụtara na mbụ, ibiere na otutu oge nwere ike o nweghi ihe jikotara ya na eziokwu. Ọ dabara nke ọma, ụfọdụ ụlọ ọrụ, ọ bụghị ha niile, na-arịọ nzaghachi onye ọrụ iji melite ma si otú a gbanwee ngwa ha maka mkpa ndị ọrụ.
Onye ahia Microsoft nke Outlook maka iOS bu otu n’ime ha. InfoJobs bụ ihe ọzọ. Ọ bụrụ na anyị lere anya na InfoJobs Fim na Storelọ Ahịa welọ Ahịa, anyị nwere ike ịhụ na ọ nwere naanị kpakpando abụọ, ọkwa dị oke mma na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịgwọta site na imeghari ngwa ahụ na dịka m kwuru n'elu, na-eji nzaghachi ọ natara n'aka ndị ọrụ.
Na InfoJobs anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ sitere na ụlọ ọrụ mba na mba, awade na ekele na ngwa anyị nwere ike ijikwa fọrọ nke nta ozugbo. Tụkwasị na nke a, ekele maka mmelite nke ngwa ahụ natara, ọ dị mfe ugbu a, ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma ịme ya na-enweghị iji kọmputa, iji nke a ga-eme ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe anyị usoro ọmụmụ.
N'ime afọ gara aga karịa Ndị gbara akwụkwọ 800.000 jisiri ike chọta ọrụ Ekele maka InfoJobs, ngwa dakọtara na iPhone, iPad na iPod touch, ịchọrọ ịchọ opekata mpe iOS 8 ma ọ bụ karịa na naanị 60 MB nke ohere na ọdụ anyị.
InfoJobs App Atụmatụ maka iOS
The ọrụ interface e ukwuu mma site modifying imewe ka imeghari ka onye ọrụ mkpa ndị na-eji ngwa a mgbe niile ịchọta ọrụ ma ọ bụ gbanwee ọrụ.
N'ihi nyocha dị elu na site na ọnọdụ, anyị nwere ike iyo ọrụ nke ahụ dị nso n'ime anyị nakwa ndị nke kachasị mma maka mkpa anyị.
Anyị nwere ike ịgbaso ihe ndoro-ndoro anyị na-ewetara ndị ọrụ awa na ozugbo na-enye anyị ohere ilekwasị anya na-achọ ọnọdụ ọhụrụ ma ọ bụ lekwasị anya na nke a họọrọ anyị.
A ukwuu choro nhọrọ site na ọrụ bụ ohere nke nwee ike gbanwee CV site na ngwa ahụ n'onwe ya. Nhọrọ a adịlarịrị kemgbe mmelite ikpeazụ nke ngwa ahụ natara.
Mgbe anyị na-atụle onyinye ndị dị anyị ka nke kachasị amasị anyị, anyị nwere ike banye na a mfe click, nke na-agbatị usoro ma na-egbochi anyị igbu oge na nke ọ bụla.
Anyị nwekwara ike hazie akwụkwọ ozi mkpuchi na ndebanye aha ọ bụla anyị na-eme ma ọ bụ mepụta ọkọlọtọ maka ha niile.
Ọ na-aga n'ekwughị na InfoJobs na-enye anyị nnukwu ọrụ gbasaa na Spain, ọnọdụ anyị nwere ike ịchọta ngwa ngwa maka ọrụ geolocation nke ngwa ahụ.
Ọrụ ọ bụla na-enye anyị Nkọwa niile nke ahụ nwere ike ịmasị anyị ịhọrọ ma ọ bụ ghara ịbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri ọrụ, dị ka ụbọchị ọrụ, ihe ọmụma dị mkpa, ọmụmụ opekempe, ụdị nke ọzọ, ahụmịhe ọrụ na ọnọdụ yiri ya ...
Ọ bụrụ na anyị nwekwara onye ị maara onye na-achọ ọrụ, site na ngwa ahụ anyị nwere ike mfe ịkekọrịta na-enye ọrụ enwere ike imeghari na profaịlụ ha.
Ọ bụrụ n’inweghi InfoJobs ngwa na ngwaọrụ iOS gị, na njikọ ndị a ị ga - enweta ya n’efu:
InfoJobs - Ọrụ na Ọrụfree
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » InfoJobs na-eme ka ngwa ya dị ọhụrụ site na imeziwanye ọrụ ya na ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ
Ọ na-amasị gị Siri? Lelee ọrụ ndị a amachaghị
Apple chọrọ ịkwadebe Siri na ọgụgụ isi na ọ ga-esi Japan